Tirada Sweden iska dhiibta oo heerkii ugu hooseysay maraysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada Sweden iska dhiibta oo heerkii ugu hooseysay maraysa
La daabacay fredag 11 mars 2016 kl 10.18
Tirada magangeliyda Sweden weydiisata ayaa mareysa heerkii ugu hooseeyey.
Dayrtii sannadkii hore 2015ka afartii qofba mid dadka guud ahaan EU magangeliyada weydiistey waxay magangeliyada ka dalbadeen Sweden gudaheeda. Halka bishii Janauri tirada qaxootiga ah ee Sweden gudaheeda magangeliyada ka dalbaday ay aheyd labaatankii qofba mid, sida ay muujineyso macluumaad xisaab oo laga helay hey'adda socdaalka ee EU.
Haddii hoos u dhaca tirada magangeliyada doonka ee Sweden magangeliyada weydiisaneysa ay sidaas ku sii socoto, waxay ka micno tahay isbaddel weyn oo ku yimid qaabilaada qaxootiga ee Sweden, sida ay la tahay wargeyska Svenska Dagbladet. Laga soo bilaabo billowgii 2000 tirada magangeliyo doon ee guud ahaan EU iska dhiiba Boqolkii 10-15 waxay magangeliyo ka dalbanayeeen Sweden.
Hoos u dhaca tirada magangeliyo doonka ah ee Sweden iska dhiiba ayaa loo malaynayaa in ay u sabab tahayisbeddel ku lagu sameeyey siyaasadda socdaalka ee Sweden taas iyana keentey in la xadido qsuurtagalnimada ah in qaraabado dib ugu midowdo Sweden. Sidoo kale hoos u dhaca waxaa kaalin ku leh ayaa la leeyahay kontorool ay waddamo badan oo Yurub ah ku soo rogeen xaduudahooda.
Xeerka cusub ee soo galootiga
Maxay la kulmaan tahriibayaasha Geeska Afrika?